'Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online' Anime - ဧပြီလစတင်ပြသမည် - MoviesFan
‘Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online’ Anime – ဧပြီလစတင်ပြသမည်
‘Sword Art Online’ ချစ်သူတွေအတွက်သတင်းကောင်းပါ။ ‘Gun Gale Online’ arc ကိုအခြေခံပြီးရေးသားထားတဲ့ spin off ဇာတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ ‘Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online’ Light Novel ကို မှီငြမ်းရိုက်ကူးထားတဲ့ anime ကို လာမယ့် ဧပြီလထဲမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Kohiruimaki Karen လို့အမည်ရတဲ့ကောင်မလေးဟာ အပြင်လောကမှာ အရပ် ၆ ပေခန့်ရှိသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အရပ်ရှည်လွန်းတဲ့အတွက် ရွယ်တူမိန်းကလေးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းဖွဲ့ရာမှာ အခက်အခဲတွေတွေ့နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Virtual Reality ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Gun Gale Online အကြောင်းကိုသိရှိသွားချိန်ကစပြီး သူမရဲ့ဘဝကြီးက အစအစအရာရာပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်။ သူမရဲ့ avatar ကို Llenn လို့အမည်ရတဲ့ အရပ် ၅ ပေခန့်သာရှိတဲ့ ချစ်စရာကောင်မလေးအသွင်ဖန်တီးပြီး အဲဒီဂိမ်းကိုစတင်ဆော့ကစားကာ သူမရဲ့ပြင်ပလောကက အခက်အခဲတွေကိုမေ့ဖျောက်ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်။ တစ်ရက်မှာတော့ Pitohui လို့အမည်ရတဲ့ အခြားကစားသူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံမိပြီး ‘Bullet of Bullets’ Tournament မှာပါဝင်ဖြစ်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်။
အောက်မှာ ဒီဇာတ်လမ်းရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်တွေကို သူတို့ရဲ့အသံသရုပ်ဆောင်တွေနဲ့တကွ တွဲဖက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Llen – Kusonoki Tomori (Yuuki Setsuna @ Love Live! School Idol Festival: PERFECT Dream Project)
Pitohui – Hikasa Youko (Aikiyama Mio @ K-On!, Stephanie Dola @ No Game No Life)
M – Okitsu Kazuyuki (Andou Reiji @ Prison School)
Fukaziroh – Akasaki Chinatsu (Nibutani Shinka @ Chuunibyou demo Koi ga Shitai!)
Action & Adventure, Anime, Fantasy, Science Fiction
Previous Post: Shinkai Makoto ရဲ့ ‘Your Name’ ပရိသတ်တွေအတွက် Challenge
Next Post: Horror ကားချစ်သူတွေအတွက် ‘Blumhouse’s Truth or Dare’ Trailer